Nwere ike ibudata akwụkwọ ahụaja dị ndụ 'convellor belt' na Pixel 5 | Gam akporosis
Fewbọchị ole na ole gara aga, anyị mere ka ị mata ohere ị nwere ike ibudata akwụkwọ ahụaja eserese nke Pixel 5, mana anyị na-efu efu. Anyị nwere ngwa nke 'Convellor Belt', na ọhụrụ pixel 5 ndụ akwụkwọ ahụaja nke anyi ji mechaa izu ike.
Pixel 5 nke ahụ bụ na-enye ọtụtụ egwuregwu n'ihi ọtụtụ APK na anyị nwere ike ibudata dị ka ha dị Igwefoto Google 8.0, ma ọ bụ Ihe nkwụnye Pixel na ụdị ọhụụ ya na na-enye ohere ịgbasa okporo nhọrọ ka akara ngosi buru ibu.
Na nke a gbasara ihe niile ihe ntanetị ahụ nke Pixel 5 anyị nwere ike ijide ụfọdụ n'ime ha mana ọ bụghị ha niile. Ya mere, a hapụrụ anyị Otu ogwe aka na tebụl na akwụkwọ ahụ aja inwe ike mezue ya ugbu a na 'Convellor Belt' a.
Dị ka ndị ọzọ na Pixel 5 animated na akwụkwọ ahụ aja na ị nwere ohere ibudata, nke ikpeazụ bụ dị maka gam akporo 7.0 ma ọ bụ karịa, ma o nwekwara ọdịiche ruru 4 ka anyị wee nwee ike ịhọrọ nke masịrị anyị.
Naanị anyị nwere iji wụnye APK n'okpuru iji nweta nke a ọhụrụ animated akwụkwọ ahụaja nke na-enye anyị ahụmịhe ọzọ nke ọnụ ọgụgụ geometric, dịka ị pụrụ ịhụ na nseta ihuenyo agbakwunyere na mbipụta a.
Nke ahụ kwuru, ị nwekwara ohere nke ibudata na akwụkwọ ahụ aja nke ekwentị Google ọhụrụ, ma ọ bụ Ntinye ederede Google nke 2.0, ọ bụ ezie na ọ naghị edegharị ederede na Spanish.
Thatbụ na dị ka ọ nwere ike, ugbu a anyị nwere zuru ezu ndepụta nke na akwụkwọ ahụ aja ma ọ bụ animated na akwụkwọ ahụ aja nke Google Pixel Ma n'ezie, ndị gị nwere Pixel ma soro ha nọrọ n'ihi na ọ bụ naanị na Pixel 5, ị ga-enwe ike ịnụ ụtọ ha site ugbu a gaa n'ihu. Nbudata ntanetị dị n'okpuru:
Ngwa 'Convellor Belt' - Download
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » APK » Budata akwụkwọ ahụaja eserese 'Convellor Belt' nke Google Pixel 5
Pluto TV rutere na Spain: yabụ ị nwere ike ịlele ya n'efu na ngwaọrụ gị